Manchester United oo dhaqan gelisay hal sano oo ay heshiiska David de Gea ku kordhisay
Friday November 30, 2018 - 00:00:28 in Wararka by Mogadishu Times
Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa go'aansatay inay ku kordhiso heshiiska Goolhaye David De Gea hal sano oo dheerraad ah. Shabaq ilaaliyahan ayaa iska diiday in United uu heshiis cusub u saxiixo, xilli la xasuusto inay dowr jeer uso
Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa go'aansatay inay ku kordhiso heshiiska Goolhaye David De Gea hal sano oo dheerraad ah. Shabaq ilaaliyahan ayaa iska diiday in United uu heshiis cusub u saxiixo, xilli la xasuusto inay dowr jeer usoo bandhigeen qiimo iyo heshiis qaalli ah, balse waxa ay Red Devils dhaqan gelisay awooddii ay u lahayd inay hal sano ku kordhiso heshiiskiisa. Qandaraaska De Gea ayaa ku ekaa sida caadiga ah dhammaadka xilli ciyaareedkan, balse hadda waxa uu idlaan doonaa dhammaadka xilli ciyaareedka xiga.
Goolhayaha reer Spain ayaa Old Trafford ka noqday xubin muhiim ah tan iyo markii uu 2011 kaga soo biirray dhanka Atletico Madrid.
Macallin Jose Mourinho ayaa laba maallin ka hor carrabka ku dhuftay in kooxdiisa ay dooneyso inay sii ceshato 28-jirkana, waxaana ugu dambeyn ay qaateen go’aan koodii ku aaddanaa inay hal sano ku daraan heshiiskiisa Masraxa Riyooyinka.